Thola usayizi wakho wesibha: ithebula
Uyazi kanjani usayizi wakho webra?
I-Underwear enhle yinto eyenza umninimzi onokwethenjelwa, ngisho noma engekho owubonayo. Izambatho zangaphansi ezikhethiwe kahle ziza ukufihla ukwehluleka kwalesi sibalo, kugcizelela ubulili ngisho nokugqugquzela ukugcwaliseka kwephupho. Ngemuva kwalokho, uma indoda ibheka kuphela intombazane ingaphandle kwezingubo zangaphandle, ilungele ukuyithola inkanyezi evela ezulwini. Kuvame ukulukhuni abesifazane ukuba banqume kahle ubukhulu babo besibhande. Itafula akusizi ngaso sonke isikhathi ukuthola izambatho zangaphansi eziphelele, futhi ukufaneleka akusi njalo njalo. Yini okufanele uyenze kulesi simo?
Silinganisela imingcele yethu
Ngaphambi kokuba uye esitolo, susa izinyathelo ezimbalwa. Zingcono kakhulu ezibhalwe ephepheni ukuze zingakhohlwa. Okokuqala, faka ibhande elingaphansi kwesifuba, khona-ke ibhande lesifuba. Ngokuvamile kaningi isibalo sokuqala somkhiqizi futhi silungiselela ebhodini, kanti lesibili sibonisa incwadi.
Indlela yokulinganisa i-girth ngaphansi kwesifuba:
susa zonke izingubo;
Gcina umhlane wakho uqonde. Ungaphefumuli ngaphakathi noma ngaphandle;
ukuqonda ngokuqinile i-ribbon yecentimeter yesigubhu sesifuba;
qinisekisa ukuthi itheyipu ihlelwe ngokuqondile.
Indlela yokulinganisa ibhande lakho lesifuba:
ukuqhuba isilinganiso endaweni evelele kakhulu yebele lakho;
amathayenti wesentimitha akufanele abe yi-taut or curved;
Ungabeki izandla zakho phezulu.
Kungcono ukubeka umsebenzi wokuhlonipha umngane wakho omkhulu. Khona-ke imiphumela iyoba nenembile kakhulu.
Usayizi weBra: itafula labakhiqizi basekhaya
Ngemuva kokuthatha izilinganiso ezimbili, sebenzisa itafula ukuze uthole ukuthi ubukhulu besibani bunjani. Noma kunjalo, khumbula ukuthi usayizi ocacisiwe ekuhlanzeni - lokhu kuyisiqondiso esiseduze kuwe. Thatha amamodeli ambalwa ngezitayela ezahlukene. Kungcono hhayi kuphela ukugqoka ibra, kodwa ukuyibeka ngokuphelele. Kubalulekile ukuzwa induduzo. Amabele akufanele acindezelwe, amathambo akufanele aphazamise.
Usayizi weBra: US Ithebula
Bheka ngokucophelela ezweni lomkhiqizi wezingubo zangaphansi. Ngempela, ubukhulu bezingubo zaseYurophu, zaseRussia naseMelika zingahlukahluka komunye nomunye. Namuhla, iVictoria's Secret ithandwa kakhulu emantombazaneni. Itafula lamasayizi amakhulu aseMelika kuzokusiza uma unquma ukuyala izinsimbi ezinkundleni yezilwandle.
Kufanele wazi ukuthi le bra ibonakala eYurophu, njengenye indlela eya e-corsets, eyalimaza amantombazane futhi yayingathandeki kakhulu. Imiklamo yale ngxenye yendlu yangasese ishintshile izikhathi eziningana. Kodwa umgogodla oyinhloko ekukhetheni i-bra ahlala engashintshi - kufanele kube lula. Ukuhamba, ukugijima, ukuhlala, ukuphefumula. Ukuhleleka kokuncenga kuhlelo lwesibini.
Lapho ukhetha into yangasese yangasese, cabanga ngobukhulu bebele. Isifuba esikhulu kufanele sisekelwe kahle yizintambo ezibanzi emahlombe. Ukukhulisa ngokubonakalayo isifuba esincane kuzosiza izinkomishi ezikhululekile nokuma okhethekile kwesibhamu. Qaphela indwangu yemvelo, njengesilika, ukotini, i-guipure. Isifuba kufanele siphefumule futhi singathintana kangako nama-synthetics. Isibonelo, ososayensi baseFrance abathandeki ukuthi bagqoke ibrasi amahora angaphezu kwama-5 ngosuku, ukuze bangangeni eqenjini eliyingozi labantu ababhekene nezifo ezingokwemvelo. Eqinisweni kulokhu isifuba sizokhubazeka, nakuba ungakwazi ukuziqhenya nge-decollete enhle.
Kumele kukhunjulwe ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ushintsha isisindo noma isakhiwo somzimba, udinga ukushintsha kokubili usayizi we-bra, futhi, mhlawumbe, isitayela sakho. Futhi khumbula ukuthi owesifazane ozihloniphayo kufanele abe nomncani wezinhlamvu ezingu-5-6 zezingubo ezigqoke izingubo zakhe.
Ukufuna ukuhamba kwe-swimsuit ephelele: indlela yokukhetha i-swimsuit efanele
Khipha konke: yini okufanele ugqoke ngo-Eva Cock 2017 wonyaka omusha
Izambatho eziphezulu ezingu-TOP ezingu-10 zezinkampani zonyaka omusha 2017
Indlela yokuhlukanisa umkhiqizo kusuka ezembathweni ezingamanga
Izindwangu zamantombazane ezishintsha imfashini, Ubusika 2016 (isithombe): yikuphi ebusika phansi kwamabhakethi okuzofakeka esimweni sonyaka we-Autumn-Winter 2015-2016
Amakhukhi we-Gingerbread wonyaka omusha
Imaski yesikhumba nezinwele, ama-peelings
I-Puff pastry ne-ham
Ukuhlolwa okuqondile kokungabi nabantwana ezinsukwini zokuhamba esikhathini
Umhlengikazi we-oncologist wabhala incwadi ngoJeanne Friske
Ukupheka okunomsoco kwezifundo zokuqala
Yini eyoba yothando emva kokuhlukaniswa?
Ukupheka okuyishumi okuphezulu kvass okuzenzela
Kungani ukuzivikela komzimba kunganciphisi nokuthi ungabuyisela kanjani?
Indlela Yokwenza I-Makeup Ye-Eyes Emehlo
Indlela yokuba owesifazane ohlakaniphile nabesilisa
Amabhisikidi ane-blueberries ne-yogurt